Fifidianana · Mey, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Mey, 2010
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Mey, 2010
Trinite sy Tôbagô : Soratsorajatovo sy sarinjatovo amin'ny fotoam-pifidianana
Karaiba 24 Mey 2010
Copy Book Page [pejin'ny kahìe] no manapariaka sarin'ny soratsorajatovo sy sarinjatovo amin'ny fotoam-pifidianana, sady manontany tena : Apparently Graffiti is only legal and accepted around election time. “Toa ohatra rehefa fotoam-pifidianana ihany vao ara-dalàna sy ekena ireo soratsorajatovo sy sarinjatovo.”
Nihitsoka nandritra ny enina andro ny tranonkala ‘Sudan Vote Monitor’ fanaraha-maso ny fifidianana
Sodàna 16 Mey 2010
Nihitsoka nandritra ny enina andro ny Sudan Vote Monitor, tranonkala mpanaramaso ny fifidianana, tamin'ny herinandro lasa teo. Nanao tatitra mikasika ny tsy fandehanan'ity tranonkala ity Reportrs Sans Frontière ary nangataka ny hamahana tanteraka ity sakana ity. Sehatra malalaka iray natsangan’ny fiarahamonina sivily Sodaney nampiasana ny rindrambaiko misokatra, Ushahidi, ny Sudan...
Tsy handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka any Madagasikara i Rajoelina
Afrika Mainty 13 Mey 2010
Ny filohan'ny Fitondrana Ambony amin'ny Tetezamitan'i Madagasikara, Andriamatoa Andry Rajoelina dia nanambara tamin'ny haino aman-jerim-pirenena [ndlr. RNM sy TVM omaly alina, Alarobia 12 May 2010] fa tsy hilatsaka ho kandidà izy amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka izay [ndlr. kasaina] hotanterahina ny faha-26-n'ny volana Novambra 2010. Ny namana Achille [ndlr. ao amin'ny...